सिराहामा बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिएकी महिलाको धरानमा उपचार हुँदै
२०७७ असोज ३ शनिबार १३:५३:००
सिराहाको सीमावर्ती गाउँमा एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको छ । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ ।
सिराहाको कुर्सन्डी गाउँपालिका– ५ नवराजपुरनिवासी ४५ वर्षीया मूर्तिदेवी यादवलाई स्थानीय धर्मनाथ यादव, उनका छोरा सन्तोष, पशुपति र अन्य देवनाथ यादव, कृष्ण यादव र ब्रह्म यादवलगायतको समूहले २८ भदौको राति निर्घात कुटपिट गरेको पीडितका छोरा गणेश यादवले बताए।
गणेशका अनुसार गाउँमा एक बच्चा बिरामी भएको थियो । अर्को एकजनाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको थियो । बोक्सी लागेर यस्तो घटना भयो भन्दै मूर्तिदेवीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिरएकाे थियाे ।
आमाको अस्पतालमा रेखदेख गर्दै आएका गणेशले भने, ‘राति १२ बजे घरबाट निकालेर सडकमा लगेर कुटे, कुटपिट गरेर खेतमा फालिदिए । उनीहरूले आमालाई मलमूत्र पनि खुवाए । छुट्याउन जाँदा मलाई पनि पिटे।’ घटनाबारे प्रहरीलाई खबर गरे पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीले बेवास्ता गरेको गणेशले गुनासो गरे ।
घटनापछि मूर्तिदेवीलाई लहानको कामना नर्सिङ होममा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालमा उनको उपचार सम्भव नभएपछि धरान ल्याइएको छ । उनको चिउँडो र गालाको हड्डी भाँचिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताए ।
उनको शुक्रबार अप्रेसनको तयारी गरिए पनि उच्च रक्तचापका कारण अप्रेसन गर्न नसकिएकाे दन्तचिकित्सक सर्जन डा. प्रदीप आचार्यले जानकारी दिए । उनकाे अहिले प्रतिष्ठानको डेन्टल वार्डको ३२ नं. बेडमा उपचार भइरहेकाे छ ।
कुटपिट गर्ने समूहले पीडित महिला र उनको परिवारलाई प्रहरीमा उजुरी गरे चोरीको आरोपमा फसाइदिने धम्की दिँदै आएको गणेशले बताए । पीडित परिवारले लगातार धम्की आएपछि प्रहरीलाई घटनाबारे सामान्य खबर गरे पनि अहिलेसम्म उजुरी दिन सकेको छैन ।
#सिरहा # बोक्सीको आरोप # कुटपिट
सार्वजनिक वनको जग्गा मारुती सिमेन्टको कब्जामा
सिराहामा १० प्रतिशतले बढ्याे विद्युत् चुहावट
बलात्कार कहिलेसम्म, हामी चुप जहिलेसम्म [फोटोफिचर]
गाउँपालिका अध्यक्षमाथि भएको कुटपिटका दोषीउपर कारबाही गर्न कांग्रेसको माग
तिहार अघि नै सयपत्री फुलेपछि किसान चिन्तित
मुम्बईको सिटी सेन्टरमा भीषण आगलागी, १२ सय पसलमा क्षति
भारतमा कोरोना संक्रमणकाे दर घट्दो क्रममा, सक्रीय संक्रमित सात लाखभन्दा कम